Uncategorized – Myitmakha Media Group
Thursday , November 1 2018
Myitmakha Media Group Myanmar News Agency | Shwe Myitmakha Media Group Co., Ltd.
Feature story ( သတင်းဆောင်းပါး)
၀တ္ထု / ကဗျာ
တိုင်းဧရာ ဝန်ကြီးချုပ် မန်းဂျော်နီနှင့် စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြုရေး သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဦးဘဟိန်းတို့ကို ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြု
January 10, 2018 Uncategorized, ဒေသတွင်းသတင်း
မျိုးမင်းထွန်း (မြစ်မခ) ပုသိမ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် မန်းဂျော်နီနှင့် စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြုရေး သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဦးဘဟိန်းတို့ကို ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ သိရှိရသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် မန်းဂျော်နီကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့် အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၈ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) …
မန္တလေးမှယာဉ်လိုင်းများ သင်္ကြန်ကာလအတွက် ထိုင်ခုံ(၅)ခုစီဖယ်ထား
March 31, 2017 Uncategorized, ဒေသတွင်းသတင်း
ကျော်မျိုးထွဋ် (မြစ်မခ) မန္တလေး၊ မတ် (၃၁) ရက်။ သင်္ကြန်ပွဲတော်ပိတ်ရက်အတွင်း အရေးတကြီး မဖြစ်မနေသွားရမည့်ခရီးသည်များ လိုရာခရီးသို့သွားလာနိုင်စေ ရန် ယာဉ်လိုင်းတစ်ခုလျှင် ထိုင်ခုံ(၅)ခုစီကြိုတင်ဖယ်ထားကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယာဉ်လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ(ယကက-အဝေးပြေး)မှဥက္ကဌ ဦးအောင်ကျော်လင်းထံမှ သိရှိရသည်။ “ယာဉ်လိုင်းတချို့ သင်္ကြန်မှာနားကြတယ်။ ဘယ်အသင်း နားမလဲဆိုတာနဲ့ ကားလက်မှတ် ပုံမှန်ထက်ပိုမယူဖို့ အသိပေးထားပြီး မဖြစ်မနေခရီးသွားရမယ့်သူတွေအတွက် ထိုင်ခုံတွေချန်ထားခိုင်းတယ်။ ဒါကလည်း အာဏာနဲ့ မဟုတ်ဘူး။ မေတ္တာရပ်ခံတာဖြစ်လို့ အသင်းတွေကလိုက်နာကြပါတယ်။”ဟု ဦးအောင်ကျော်လင်းကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ချင်းပြည်နယ်မှအမျိုးသမီးများမှာ ကလေးအမွေးဖွားဆုံးဖြစ်နေ
March 19, 2017 Uncategorized, နိုင်ငံရေးသတင်း
အေမီအောင်(မြစ်မခ) ချင်းပြည်နယ်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင် ကလေး(၄.၆)ယောက်နှုန်းဖြင့် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များအနက် မွေးဖွား မှုနှုန်း အများဆုံးဖြစ်နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လူနေမှုဘဝနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်အလက်စစ် တမ်း(၂၀၁၅-၁၆)အရ သိရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိအမျိုးသမီးများတွင် မွေးဖွားနှုန်းမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ကလေး(၂.၃)ယောက်ရှိသည့်အနက် ချင်းပြည် နယ်တွင် အများဆုံးဖြစ်ပြီး မကွေးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတို့တွင် ကလေး(၁.၈)ယောက်စီဖြင့် မွေးဖွားနှုန်းအနည်းဆုံး ဖြစ်ကြောင်း မတ် ၂၄ ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇမ္ဗူသီရိဟိုတယ်၌ပြုလုပ်သည့် အဆိုပါစစ်တမ်းထုတ်ပြန်ပွဲမှ သိ ရသည်၊၊
အယ်နီညိုကြောင့် အစာရေစာရှားပါးခြင်းများကြုံတွေ့လာပါက လူကယ်ပြန်မှ လူတစ်သိန်းအတွက် သုံးရက်စာ စီစဉ်ထား
February 25, 2016 Uncategorized, ပြည်သူ့ သတင်း
မင်းအောင်မြင်(မြစ်မခ) အယ်လ်နီညိုရာသီဥတုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးအဖြစ် အစာရေစာရှားပါးလာပါက ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လူတစ်သိန်းအား သုံးရက်စာ ထောက်ပံ့နိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တစ်ဦးလျှင် တစ်ရက်ဆန်(၂)ဗူးနှုန်း၊ ခေါက်ဆွဲ ခြောက်နှစ်ထုပ်၊ ကြက်ဥ နှစ်လုံး၊ ရေတလီတာပေးရန် လူတစ်သိန်းစာအတွက် ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဘတ်ဂျက်တောင်းခံ ထားကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်မီးသွေးများကို အဖုံးအကာမဲ့သယ်ယူခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်လာနိုင်
December 16, 2015 Uncategorized
ကိုမင်း(မြစ်မခ) တာချီလိတ်၊ ဒီဇင်ဘာ(၁၆)ရက်။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း နမ့်ဆန်မြို့အနီးရှိ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံများသို့ ကျောက်မီးသွေးများကို အဖုံးအကာမဲ့ ကားများဖြင့် သယ်ယူနေကြခြင်းမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များက သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်သည်။ “ကျောက်မီးသွေးကို အဖုံးအကာမဲ့သယ်ရင်တော့ ဒေသခံတွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ကျောက် မီးသွေးက အချင်းချင်းပွတ်တိုက်မှုဖြစ်ရင် မီးတောက်တယ်။ နောက်ပြီး လမ်းမှာကျရင် ကျောက်မီး သွေးက အရည်ပျော်ပြီး မြေကြီးထဲစိမ့်ဝင်သွားရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အများကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်။ အခု အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ ကျောက်မီးသွေးသယ်ယူမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မူဝါဒတွေရေးဆွဲ ထားတာ မရှိဘူး။ လာမယ့်အစိုးရလက်ထက်မှာ ဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။”ဟု သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် ဒေါက်တာ ဒေါ်စိန်စိန်သိန်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်ပြည်နယ်သို့ ရောက်ရှိ
မန္တလေးမြို့တွင် မီးလောင်မှုကြောင့် လူနေအိမ်(၈)လုံး၊ ဆိုင်ကယ်အစီး(၉၀)နှင့် ကားတစ်စီးဆုံးရှုံး
လောက်ကိုင်မြို့တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် လားရှိုး-လောက်ကိုင်ပြေးဆွဲနေသော ခရီးသည်တင် ယာဉ်လိုင်းများ ရပ်နား
မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမင်းမင်းဦး လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်မှ နှုတ်ထွက်စာတင်
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကသာမြို့တွင် လမ်းမြေချဲ့ရာမှ စစ်ကျန်ဗုံးသီးဟောင်းများနှင့် ကျည်ဆံများ တွေ့ရှိ
မိုင်းဖုန်းဆရာတော် စေတီတည်မည့် ကွတ်ခိုင်မြို့အနီးရှိ လွိုင်ဆမ်ဆစ်တောင်ပေါ်သို့ နေ့စဉ်လူသောင်းနှင့်ချီ လာရောက်
ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည့် သမိုင်းဝင်စေတီ၊ ပုထိုးများမှ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ပြုပြင် ပြီးစီးမည်
မိုင်းဖုန်းဆရာတော် စေတီတည်မည့် လွိုင်ဆမ်ဆစ်တောင်တွင် စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးနှင့် လှေကားထစ်များပြု လုပ်မည်
Huawei P20 နှင့် P20 Pro ကို ဇွန် ၃ ရက်မှ စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီ
၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်မယ့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲက ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး ရေပေါ်နိုင်ငံ
ရွှေမြစ်မခ မီဒီယာဂရု ကုမ္ပဏီလီမီတက်ခ်။
ဖုန်း - ၀၁ ၅၀၁၀၅၈, ၀၉ ၇၃၀၇၆၅၇၆,
၀၉ ၄၉၂၈ ၄၇၅၇, ၀၉ ၇၃၂၀ ၅၃၂၇
တိုက် ၁၇၊ အခန်း ၇၉+ ၈၀၊
Created by Kite Media
Copyright © 2016, Myit Ma Kha Media Group. All Rights Reserved.